अर्जुन लामाको ह,x त्या : अपूरै छ १६ व,र्षदेखिको न्यायको लडाइँ ! आज सुनुवाइ हुँदै – Taja Khawar
अर्जुन लामाको ह,x त्या : अपूरै छ १६ व,र्षदेखिको न्यायको लडाइँ ! आज सुनुवाइ हुँदै
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १३, २०७८ समय: १२:४६:२३
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको ह,x त्या अभियोगको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि ह,x त्या गरेको भन्दै परेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा यसअघि पटक–पटक पेसी चढ्दै आएको छ ।
आज संवैधानिक इजलासमा सभामुखविरुद्धको सुनुवाइ पहिलो नम्बरमै पेसीमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन् ।
लामाको अ,प,ह,र,ण,पछि ह,x त्यामा संलग्न रहेको आ,रो,प,मा, प,क्रा,उ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा अग्निप्रसाद सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेको थियो, अहिले उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख छन्।
प्रालिका अध्यक्ष प्रल्हाद लोहनीले कोरोनाबाट थलिएको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न पहिलोपटक काठमाडौँ–मेघौली पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । “आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै नयाँ गन्तव्यस्थलमा पर्यटकीय बस सेवा विस्तार गरेका हौँ”, उनले भने ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर तयारी थाले पनि कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । राजधानीको मुख्य पर्यटकीयस्थल ठमेललाई लक्ष्य गरेर झण्डै १०० पर्यटकीय बसले सेवा प्रदान गर्दै आए पनि कोरोनाका कारण उक्त बस सेवा रोकिएका थिए । हाल काठमाडौँको सोह्रखुट्टे सडकबाट पर्यटकलाई बोकेर पर्यटक बस पोखरा, चितवनको सौराहा, लुम्बिनी र जनकपुर ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन्
Last Updated on: September 29th, 2021 at 12:46 pm